GIS Manifold oo abuuraya qaabab daabacaad - Geofumadas
GIS Manifold oo abuuraya layliyo daabacan
Mashruucaan waxaan arki doonaa sida loo abuuro khariidad soo saarid ama waxa aan ugu yeerno qaabeynta adeegsiga Manifold GIS.
Xaaladaha aasaasiga ah
Si loo abuuro qaab-dhismeed, Manifold waxay u oggolaaneysaa xog-dhismeedka in la buuxiyo, ama sida khariidad loo yaqaan, in kasta oo ay ku dhex jiri karto fayl ama ay la xiriiri karto lakab ama shay kale oo loo yaqaan waalidka Manifold. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la habeeyo daabacaadaha iyo xajmiga warqadda si taasi ay kuxirantahay tan qaabeynta ayaa socota, xaaladdan waxaan ku doortay xaashi cabbir xaraf ku leh qaab jiifa.
Shaqada ugu weyn waa in la isku keeno xogta, halkaasoo lagu qeexayo waxa lakabta la raaci doono, midabka, calaamadda, daahfurnaanta, iwm.
Sida laga soo xigtay garaafka hoose on xaq in guddiga ugu sareeya waa ilaha xogta, taas oo aan doonayaa in aan noqdo in dataframe (map) suuqa kala gurguurto iyo shaqsi thematise ah.
Kadib qeybta hoose ee midig waxaa ku yaal lakabyada (lakabyada) xogtani (khariidada) halkanna waxaad ku tilmaami kartaa nidaamka ay qaadan karaan, iyo sidoo kale daahfurnaanta. Isla sidaas ayaa lagu samayn karaa tabsyada ka hooseeya muujinta oo la jiidi karo si loo beddelo amarka ama loo demiyo ama loo rogo guji laba jeer.
Kadib si aad u abuurto qaab-dhismeed cusub, ku calaamadee qaybta saxda ah sida haddii aad sameyn lahayd qayb ka mid ah oo aad dooranayso qaabeynta. Kadibna guddi ayaa ka soo muuqan doona shayga uu noqon doono qaabka (waalidka), magaca iyo haddii aan filayno template. Waxaa sidoo kale lagu tilmaami karaa inaysan waalid lahayn. Qormadan Manifold way gaabaneysaa maxaa yeelay ma laha sheybaar ku filan sida ArcGIS.
Kala habee qaabeynta
Kadib si aad u habeysid, laba-guji khariiddada la abuuray, oo aad midig u-gujiso qaabka. Halkan waxaa suurtagal ah in la isku hagaajiyo:
Meesha shaqada (scope) in loo samayn karaa qaab muuqaal badbaadiyey, qaabka, jir ah ka barta xarunta iyo qiyaasta, lakabka ah, xulashada of shay ama qayb gaar ah.
In kiiskayga ayaan u qabanaynaa oo ku salaysan aragti badbaadi (view) oo asal ahaan waa meel lagu qeexaa hab toobiye sida gvSIG ama ArcGIS falaa.
markaa waad qeexi kartaa khariidadda, sida ay suurtagal u tahay in la qeexo imisa bog ayaa u soo bixi doona sida matrix ah (nooca 2 × 3) oo waxaad u tilmaami kartaa si shaqsiyeed taas oo aan rabno in la arki karo.
Waxaad sidoo kale qeexi kartaa haddii aad rabto inaad soo bandhigto asalka shaqada, jaantuska, mesh geodeic, xadka, waqooyiga, qiyaasta garaafka iyo miro kale.
Oo halkan waxaan haysanaa iyada oo aan wax badan soo noqon.
Halyeeygu wuxuu u qaabeysan yahay aragti / halyeey, halkaasna waxaad ku qeexaysaa lakabyada la calaamadeyn doono iyo haddii ay doonayaan in aan la is-uruurin iyo in kale. Waxaad sidoo kale tafatiri kartaa magacyada iyo haddii qaabka halyeeygu uu dhinac u jaan qaadi doono ama dabacsan doono.
Si la mid ah, calaamadda woqooyiga iyo qiyaasta garaafka ayaa loo qaabeeyey.
In lagu daro Kudar sawirro, kuwani waxaa looqeexaa inay yihiin qaybo isku xiran ama la soo dhoofiyay laguna jiiday qaabka. Si loogu daro walxo kale, waxaa laga soo xulay guddiga sare ee la soo bandhigayo marka qaabku furan yahay, waxay u oggolaanayaan in lagu daro xarriiqyo siman, toosan, sanduuqyo, qoraallo, halyeeyo, calaamadda woqooyi ama cabbirka garaafka.
Si loo xakameeyo booska waxaa jira qalab si aan isugu toosinno, waa in iyaga gacanta la ctrl + alt keypresses taabto iyo waxa ay tusinaysaa Guntin ah in la gacanta dhaqaajin karin.
Si aad u dhoofiso, midig u guji qaabeynta iyo dhoofinta. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la muujiyo xallinta dhibcaha halkii inji (DPI) iyo haddii qoraallada loo beddelayo vector. Waxaa loo dhoofin karaa Adobe Illustrator (.ai), pdf, emf, iyo qoraalka.
Halkan ayaad soo dejisan kartaa faylka loo dhoofiyo pdf.
Jaleecada hore, waxay umuuqataa kala badh in loo qaatay fuulid sababtoo ah caawimada yar ee kajirta buuga ku jihaysan "sida loo sameeyo" laakiin dhab ahaantii waa mid aad u xoogan. Jahwareerkii ugu horreeyay ee igu dhacay ayaa ka fikiray ... "sidee baan ugu dari karaa xog dheraad ah qaabeynta?"
Fudud, shay kasta oo ku jira guddiga mashruuca waa la jiidayaa, wuxuu noqon karaa wax kasta oo la galiyo ama lagu xiro. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa miis heer sare ah, kaas oo kaliya kuxiran, taas oo macnaheedu yahay in loo habeyn karo Excel si ay u dhadhamiso, ka dibna ay kaliya ku xirnaato oo lagu jiido qaabka.
Mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha la jiiday ayaa leh shakhsiyad u gaar ah sida aan ku sharxay kore, shaxda isudbinta iwm.
Marka la barbardhigo Arcview 3x, tani waa mid aad u adag, laakiin marka la barbardhigo ArcGIS 9x waxay ka hooseysaa "caadiga" maxaa yeelay waa inaad fahamtaa habka kala duwan ee fikirka naqshadeeyayaasheeda. In kasta oo ArcGIS ku xadidan yahay dhinacyada qaarkood sida tirada qaababka la abuuri karo ee la xidhiidha ama aan lala xiriirin karin xogta, tayada soo bandhigistu waa mid aad u soo jiidasho leh, marka laga reebo qaabkeeda hore loo qaabeeyey iyo qaar ka mid ah siyaado sida geesaha wareega ee waxa Manifold uu cayriin yahay.
Hadda, iyada oo Manifold uu wanaagsan yahay joornaalada kale, dib loo dhigo waxqabadka.
ArcView GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Microstation V8i, shuruudaha
Post Next Isbarbardhigga ArcGIS iyo Manifold GISNext »